Karen Community Association UK: February 2011
84,000 Karen Civilians Call on Ban Ki-moon to Help...
KNU Statement on Baseless Accusation by SPDC and C...
Opressive government in Burma
ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ်ထံ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့များ အိတ်ဖ...
မိန်းမ ၃၉ ယောက်ယူထားတဲ့ မြန်မာနွယ်ဘွားတယောက်
Karen Community in Czech Republic (KCCR)
Global Day of Action for 34 Resistance Fighters Fr...
Phan Foundation Announces £8,000 of Grants﻿
KNU မှထုတ်ပြန်သော ၂၀၁၀ခုနှစ် တိုက်ပွဲစာရင်းချုပ်
မြဝတီ-ကော့ကရိတ်လမ်း စစ်အစိုးရတပ်ကားတွေ မစီးကြဖို့ ...
ဟတ်ကြီးရေကာတာရပ်ဖို့ KNU ပြော
အကျဉ်းစံ ကရင် နှင့် ရခိုင် တော်လှန်ရေးသမား (၃၄) ဦ...
တပ်မဟာ ၄မှ ၆၂နှစ်ပြည့် ကရင့်တော်လှန်ရေးနေ့ မှတ်တမ်...
ရန်ကုန်တွင် “ရှမ်းပြည်နယ်နေ့” အမည်တပ်ကျင်းပခွင့် မ...
၆၄နှစ်မြောက် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးနေ့အတွက် ဂုဏ်ြ...
Karen Community Based Organizations's summery Repo...
ကမ္ဘာသိ ဓါတ်ပုံများ ရိုက်ကူးခဲ့သူ ကရင်တယောက်ရဲ့ အြေ...
84,000 Karen Civilians Call on Ban Ki-moon to Help Stop Attacks in Burma (Karen Language)
84_000 Karen Civilians Call on Ban Ki-moon to Help Stop Attacks in Burma in Karen Launguage
Posted by KCA.UK at 10:330comments
84,000 Karen Civilians Call on Ban Ki-moon to Help Stop Attacks in Burma (Burmese Language)
84_000 Karen Civilians Call on Ban Ki-moon to Help Stop Attacks in Burma in Burmese Launguage
Posted by KCA.UK at 10:310comments
84_000 Karen Civilians Call on Ban Ki-moon to Help Stop Attacks in Burma
We, the Karen National Union (KNU), reject totally the baseless accusation by the State Peace and Development Council (SPDC), the military dictatorship of Burma, that the Karen National Liberation Army (KNLA) troops fired heavy weapons atalemon farm owned by U Zaw Lay Htoo in Shwegyin Township, Bago Division, at about9am on 17 February, leaving four farm workers dead and three wounded.
The SPDC further asserted that the KNU was undermining the peace of the State, and committing destructive acts causing death and injury. The world knows well that it is the SPDC policy to allow its troops to shoot and kill innocent civilians, burn villages and farms, torture suspects, commit rape of women etc. in all the KNU areas. In urban areas, the SPDC imprisons people asking for human rights and freedom, sells narcotic drugs freely and deliberately to impoverish the population.
The latest accusation is justasmoke screen for the military dictatorship to build up an offensive against the KNU and the KNLA, which is the armed wing of the KNU. Our troops have few heavy weapons and unlike the SPDC, they never deliberately fire on civilian targets.
To help solve Burma ’s problems, we have repeatedly urged the Burmese regime to respond to calls by the United Nations General Assembly, United Nations Security Council, European Union , United States of America and others, to engage in genuine tripartite dialogue with the opposition forces, for positive change. However, the regime refuses and instead continues to target our civilian populations for military attack.
We, the KNU together with the other ethnic nationality forces, are ready for dialogue in order to resolve Burma ’s political problems through political means. We call upon the international community, and peace and justice loving countries around the world to support actively the United Nations Secretary General Ban Ki-moon to secureanationwide ceasefire, leading to meaningful and inclusive dialogue to achieve national reconciliation andareturn to democracy and normalcy in our country.
ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ်ထံ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့များ အိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့
(Photo Courtesy of Democracy Activists from London)
လန်ဒန်မြို့ အမှတ် ၁၀ ဒေါင်းနင်းလမ်းရှိ ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ်၏ နေအိမ်ရှေ့တွင် ဆရာတော် ဦးဥတ္တရ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ကချင်၊ ချင်း၊ ကရင်၊ မွန် တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်နေ့က ဝန်ကြီးချုပ်ထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ပေးပို့ပြီးနောက် တွေ့ရပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo Courtesy of Democracy Activists from London)
ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချူပ်ရုံးကို လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ သာသနရံသီ ဝိဟာရ ဆရာတော် ဦးဥတ္တရ၊ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်) တို့ကနေ အဲဒီ အိတ်ဖွင့်ပေးစာကို သွားရောက် ပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီ ပေးစာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွတ်မြောက်နယ်မြေ လန်ဒန်ဌာနခွဲ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က RFA ကို အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“မကြာသေးခင်က ဖွဲ့လိုက်တဲ့ ပါလီမန်ဟာ အတုအယောင် ပါလီမန်ဖြစ်တယ်။ ပြည်သူလူထုကနေ ကိုယ်စားမပြုတဲ့ ပါလီမန်ဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာမှာ ရှိတဲ့ အစိုးရတွေကနေ စုပေါင်းပြီး ဒီပါလီမန်ကို အသိအမှတ်မပြုဖို့ အမြန်ဆုံး တောင်းဆိုတယ်။ နောက်တခုက မကြာသေးခင်ကပဲ စစ်အုပ်စုကနေ ထုတ်လိုက်တဲ့ သတင်းစာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒီလို ဆက်ပြီး လုပ်နေမယ်ဆိုရင် will meetatragic end လို့ ခြိမ်းခြောက်တာဟာ တရားမမျှတဲ့ဟာ ဖြစ်တယ် ။ ဒါဟာ အစိုးရတခုရဲ့ မလုပ်သင့် တာဖြစ်တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တခုခုဖြစ်သွားရင် အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ကျနော်တို့က ထောက်ခံတယ် ။ ထို့အတူ အဲဒါကို အမေရိကန်အစိုးရက ထောက်ပြပြီး ရှုတ်ချတဲ့အတွက်လည်း ဒီ ဗြိတိသျှအစိုးရကလည်း အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ တွဲပြီး အဲဒါမျိုး အမြန်ဆုံး တွဲပြီး လုပ်ဖို့ စစ်အုပ်စုကို အမြန်ဆုံး ဖိအားပေးဖို့ ကို ကျနော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်ထံကို ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။”
ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးရဲ့ တုံ့ပြန်ချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က ခုလို ပြောပါတယ်။
“လုံခြုံရေးအရာရှိကနေ လက်ခံယူပါတယ်။ သူကနေ ဝန်ကြီးချုပ်ထံကို တင်ပြပေးမဲ့အကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်ဆီကနေ ကျနော်တို့ဆီကို တုံ့ပြန်စာ ပြန်စာပေးမဲ့ အကြောင်းကို ပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။ သူတို့ကလည်း ကျနော်ဆီကို အမြဲတမ်း သူတို့ကတော့ အမြဲတမ်းပါပဲ ကျနော်တို့ စာပေးလို့ရှိရင် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း နောက်ဘာတွေ ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာကို တုံ့ပြန်တဲ့စာကုို ပေးပါတယ်။”
Posted by KCA.UK at 08:580comments
ရန်ပိုင် Tuesday, 22 February 2011 17:59
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ဦးတေဇ စီးနင်းလိုက်ပါလာသည့် ရဟတ်ယာဉ် သည် ကချင်ပြည်နယ် အနောက်မြောက်ပိုင်း ဖုန်ကန်ရာဇီ ရေခဲတောင်တွင် ဆင်းသက်ရာ ရေခဲပြင်အတွင်းသို့ ကျွံကျသွားကြောင်း သိရသည်။
ရေခဲတောင်ပေါ်၌ အနားယူနေသော ဦးတေဇ (ဓာတ်ပုံ - airbagan)
ယမန်နေ့ နံနက်က ဦးတေဇ အပါအ၀င် ထူးကုမ္ပဏီမှ ၀န်ထမ်း ၆ ဦးသည် ပူတာအိုမြို့မှ ဖုန်ကန်ရာဇီ ရေခဲတောင်သို့ ယူရိုကော့တာ (Eurocopter) အမျိုးအစား ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ထွက်ခွာသွားကြောင်း၊ ထို့နောက် ဆင်းသက်ရာ ရဟတ်ယာဉ် တဖက်ခြမ်းသည် ရေခဲပြင် အတွင်း၌ နစ်မြုပ်သွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မည်သူမျှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခြင်းမရှိကြောင်း တပ်မတော် (လေ) အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပြောဆိုသည်။
ယင်းရဟတ်ယာဉ်သည် ဦးတေဇ၏ ကိုယ်ပိုင် ရဟတ်ယာဉ်ဖြစ်ပြီး အမြင့်ပေ ၁၂၀၀၀ ခန့်အထိ ပျံသန်းနိုင်ကြောင်း ခရီးစဉ် ရည်ရွယ်ချက်မှာ လာမည့် မတ်လတွင် ရေခဲတောင်တက်ရန် အတွက် ကောင်းကင်မှနေ၍ လမ်းကြောင်းရှာရန် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဖုန်ကန်ရာဇီ ဒေသတွင် ဖုန်ကန်၊ ဖန်ဂရန်၊ ဖုန်ရင်၊ မဒွယ် စသည့် ရေခဲတောင်များ အပြင် ဖုန်ကန်ရာဇီ ဘေးမဲ့တောလည်း ရှိသည်။
ယခုအခါ ဦးတေဇ အပါအ၀င် ၀န်ထမ်း ၆ ဦးကို မိထ္တီလာမြို့တွင် အခြေစိုက်သည့် တပ်မတော်(လေ)မှ ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် သွားရောက် ခေါ်ယူနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ မနက်ဖြန်နံနက်တွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်(လေ) အသိုင်းအ၀ိုင်းက ဆိုသည်။0
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကိုယ်ပိုင်အသေးစား ရဟတ်ယာဉ်များသည် ဦးတေဇနှင့် ဒေ၀ူး၊ တိုတယ် စသည့် ရေနံကုမ္ပဏီများတွင်သာရှိသည်ဟု သိရသည်။
ပူတာအိုမြို့ အနီးရှိ မူလာရှီဒီ ကျေးရွာ မူလာရှီဒီချောင်းနံဘေး ကြိုးတံတားအနီးတွင် နိုင်ငံခြား ခရီးသွားများအား ရည်ရွယ်ပြီး Malikha Lodge အမည်ရှိ ဦးတေဇပိုင် ဟိုတယ် ၁၀ လုံးခန့် ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
ဦးတေဇသည် မကြာသေးမီက အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ နိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုကို ဆန့်ကျင်ပြီး တန်ပြန် စီးပွား ရေး ပိတ်ဆို့မည်ဟု The Future Myanmar Business Report မဂ္ဂဇင်းနှင့် တွေဆုံ မေးမြန်းခန်းတွင် ဖြေဆိုခဲ့သူဖြစ်သည်။
Posted by KCA.UK at 09:310comments
Posted by KCA.UK at 23:330comments
The "Chanas" at No9 comprises 181 members - and none of them is on benefits.
Dad Ziona has 39 wives, 94 children, 14 daughters-in-law and 33 grandchildren - all living together under one roof.
Believed to be the biggest family in the world, home isahuge, 100-room, four-storey house where they sleep in dormitories.
And even then they have to go top-to-tail to fit.
Handily, head of the family, Ziona, 67, also runs his own sect - which allows multiple marriage.
He says he feels blessed to have so many of his brood living with him, adding: "Today I feel like God's special child.
"He's given me so many people to look after.
"I consider myselfalucky man to be the husband of 39 women and head of the largest family."
All the men of the family work as carpenters and Ziona says proudly: "We don't want any help from the government."
The super-dad once married ten women inayear.
'Have you finished in the bathroom yet?' ... the Chana house with its 100 rooms dominates the village
Posted by KCA.UK at 23:590comments
Karen Community in Czech Republic (KCCR) has been formed on 14 February 2011 with the support from board members of European Karen Network (EKN), Nant Bwa Bwa Phan from Karen Community Association UK and Naw Tar Eh Shee from Karen Community Norway. There are only 23 people (4 families) of KCCR and they have been living in Czech Republic since August 2010 so in need of our support. European Karen Network (EKN) is determined to support them as much as possible. There are also the Chin community, which isabit bigger than the Karen and establishedabit longer andaKachin family They all in need of our support and we must support them as much as we can.
Posted by KCA.UK at 10:320comments
Posted by KCA.UK at 11:400comments
Posted by KCA.UK at 02:060comments
by Karen Community Association UK on Friday, 11 February 2011 at 22:29
Represent from KNU, KCA-UK & Arakanese Community UK delivery letter to High Commission of India.
The thirty-four briefing is available at:
Arakanese Community - UK
Arakanese Community - USA
Karen National Union - Germany
Party of European Socialists - Stockholm
All Arakan Students’ and Youths’ Congress - Bangladesh
All Arakan Students’ and Youths’ Congress - Thailand
Posted by KCA.UK at 19:190comments
ကရင်ကွန်မြူနတီယူကေ နှင့် Burma Campaing UK တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှူကြောင့် ယူကေအစိုးရရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ထောက်ပံ့ငွေ ၃၇% တိုးရရှိ ခဲ့ပါတယ်။ အဓိက အောင်ပွဲကတော့ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ထောက်ပံ့ငွေ (cross border aid) ရရှိခဲ့ခြင်းပါဘဲ၊ ဒီငွေများဟာ မယ်တော်ဆေးခန်း၊ ရှမ်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့ နှင့် Free Burma Rangers အဖွဲ့ များမှ တဆင့် နယ်စပ်ဒေသရှိ ရွှာပုန်းရွှာရှောင် (IDP) များထံကိုပေးပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကရင်ကွန်မြူနတီယူကေ ရဲ့ နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ရမဲ့အချက်ကတော့ကတော့ ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ရရှိတဲ့ထောက်ပံငွေထဲမှ အဓိက လိုအပ်နေတဲ့ နယ်စပ်ဒေသတွေကိုပိုမိုပေးပို့ဖို့ ယူကေအစိုးရကို လုပ်ဆော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းကပြည်သူတွေမှာအကူအညီလိုအပ်သည်မှာမှန်သော်လည်း တောတွင်းမှာ နေစရာ စားစရာ ကုစရာ ဆေးဝါး မရှိပဲ အသက်လုပြီး ပြေးလွှားပုန်းရှောင်နေရတဲ့ နယ်စပ်က ပြည်သူတွေအတွက် ဒီထောက်ပံငွေက အင်မတန်မှ လိုအပ်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
Demonstration infront of UK Foreign and Commonwealth Office (9 Mar 2010)
Burmese democracy campaigner Aung San Suu Kyi was released from house arrest last year
British aid to Burma – the poorest country in South-east Asia – is to be sharply increased in an effort to help the country's most beleaguered and to support the struggle for democracy.
A review carried out at the behest of Andrew Mitchell, the international development secretary, has concluded the £32m currently spent in Burma should increase toatotal of £185m over the next four years. Officials say the money will target grass roots organisations and other partners working there and not to the military junta.
"Britain has not forgotten the people of Burma, who have been silenced for too long. They have suffered under decades of dreadful economic mismanagement and human rights abuses as well as the ongoing threat of civil war and famine," Mr Mitchell said inastatement. "The poorest in Burma must haveavoice. We will build up civil society, local charities, village groups and their representatives to push for change."
While the Coalition says the total budget for international aid budget is to be increased by 37 per cent in real terms, Mr Mitchell said last summer that he believed the money needed to be targeted more effectively. It is expected that the aid budgets to many countries will be sharply reduced or scrapped. India,acountry where the economy is growing by more than 8 per cent and where Britain currently annually spends £280m, is one of those places where some believe aid should be halted. In contrast, the minister announced earlier this month that aid to Somalia is to be tripled, from £26m in 2010-11 to £80m in 2013-14.
The review, the full results of which are expected to be announced later this month or in early March, found that in Burma at least 16 million people live in desperate hardship. The junta, which recently oversaw controversial elections foralargely toothless parliament, spends justatiny amount on services healthcare and education.
Officials said DFID will work withagrowing number of community groups and aid organisations working "to promoteapeaceful and democratic future for Burma from the bottom up" to try to address some of this shortfall. In particular, money will be targeted towards improving maternal health and reducing the threat of malaria, estimated to affect more than 8 million Burmese. In addition, they believe the money will support 225,000 children through primary school, help increase food production for 200,000 people and provide micro-finance to another 100,000. Money lenders in the country currently charge interest rates of up to 200 per cent.
The increased funding has been welcomed by campaign groups, which had been urging the department not to cut back on spending. They said, however, Britain could do more. "We would also like to see them be more creative in ensuring aid reaches the most needy, and not just channel large grants through UN agencies which face restrictions on their operations, especially in ethnic [minority] areas," said Mark Farmaner of Burma Campaign UK. "DFID should significantly expand democracy promotion work via groups in exile which manage underground networks, as well as civil society in country, as there are strict limitations on what can be done in country."
* The Australian publisher of an English-language newspaper in Burma has been arrested in what an associate suggested wasabusiness dispute. The Myanmar Times editor-in-chief, Ross Dunkley, was in Rangoon's Insein jail on charges of violatingasection of the immigration law on overstayingavisa. The associate said his arrest coincided with "tense negotiations" with his Burmese business partners.
British aid in numbers
£32m Current British bilateral aid to Burma
£185m Intended aid to Burma over next four years
£8.7bn Total UK overseas aid budget this year, set to rise to £12.6bn by 2014
42% Share of aid sent to Burma spent on healthcare
$5 The total international aid spend on Burma per capita
$37m US government's intended spend this year
Posted by KCA.UK at 22:320comments
General Secretary Mahn Sha (right) of KNU pictured with Gen Bo Mya at Karen Revolution Day in 2004. (Photo: Htain Linn)
Posted by KCA.UK at 21:250comments
by Zoya Phan on Monday, 14 February 2011 at 10:28
Media Release From Phan Foundation
For Immediate Release 14th February 2011
Phan Foundation Announces £8,000 of Grants
On the third anniversary of the assassination of Padoh Mahn Sha La Phan, then General Secretary of the Karen National Union, the Phan Foundation announces grants of £8,000 to carry on his work.
The Phan Foundation was set up by the four children of Padoh Mahn Sha and Nant Kyin Shwe, in their memory.
Recognising the need of organisations to receive long terms grants which they can depend on, the Phan Foundation has committed to the following annual grants
£700 foracommunity run orphanage in Doo Tha Tu District
£1,000 to Karen Education Department for teacher salaries
£200 to the European Karen Network for its work promoting human rights
£600 to Kwekalu for its news services which provide education, protect Karen culture, and promote human rights
The annual Padoh Mahn Sha Young Leader Award will continue to be made, withagrant of £1,500 to support the work of the recipient. This year award will be announced and presented at the Karen Unity Seminar.
In addition, the Phan Foundation announces the following grants:
£1,000 to the Karen Education Department for teacher training
£1,000 – to Kwekalu for its news services which provide education, protect Karen culture, and promote human rights
£250 – foraschool in Mutraw
£650 to Karen Student Network Group for production of its magazine
£200 – to support students in Pa’an.
£800 – Students in Kler Lwe Htoo District.
“We are pleased to announce these grants, in memory of our parents,” said Zoya Phan, Founder and Director of the Phan Foundation. “We think this is one of the best ways we can pay tribute to our parents, and continue their work. The organisations we are supporting do fantastic work which deserves support. We hope than in the future the Phan Foundation will be able to grow and increase the projects it can support. We are grateful to all our donors who have enabled us to make these grants.”
On 14th February 2008 Padoh Mahn Sha was assassinated at his home in the town of Mae Sot, on the Thailand Burma border, by agents of the Burmese dictatorship.
The Foundation has four main objectives: To alleviate poverty; To provide education;
To promote human rights; To protect Karen culture; For the Karen people of Burma.
People wishing to donate to the Phan Foundation can do so at www.phanfoundation.org
Note to Editors: The Padoh Mahn Sha Young Leader Award for 2010 will be announced in May 2010 during the Karen Unity Seminar.
My father, Padoh Mahn Sha Lah Phan, former General Secretary of Karen National Union, January 2008.
Posted by KCA.UK at 19:030comments
Summary of Battle news 2010 -
Posted by KCA.UK at 14:480comments
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း ဝေါလေဒေသကနေ ကော့ကရိတ်မြို့ကို ပြန်လည် ဆုတ်ခွာသွားတဲ့ စစ်အစိုးရ ခြေလျင်တပ်ရင်း ခလရ (၈၁) ဟာ အရပ်ဝတ်တွေလဲပြီး စစ်ကားတွေပေါ်မှာ လိုက်ပါသွားတဲ့အတွက် အရပ်သားတွေနဲ့ မှားယွင်းပစ်ခတ်မှာ စိုးတဲ့အတွက် အခုလို သတိပေးရတာဖြစ်ကြောင်း ဒီကေဘီအေ တပ်မှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် စောလားပွယ်က ပြောပါတယ်။
စစ်အစိုးရ စကခ (၁၉)၊ တပ်မ (၂၂) အပါအဝင် အင်အား တော်တော်များများဟာ ဝေါလေ နဲ့ ဖလူး ဒေသတွေကို ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးချုပ် စောလားပွယ် ဦးဆောင်တဲ့ ဒီကေဘီအေ တပ်တွေကလည်း မြဝတီ- ကော့ကရိတ်လမ်းကြောင်း တလျှောက်မှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ပထမအပတ် ကတည်းက တန်ပြန် ထိုးစစ်ဆင်နေတာ ဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ၁ဝ ရက်နေ့က တိုက်ပွဲတွေ စဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဒီကေဘီအေတပ်တွေနဲ့ ပူးတွဲ တိုက်နေတဲ့ အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် တပ်မှူး ကိုခင်ကျော်က ပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက ကော့ကရိတ်မြို့မှာ ရှိတဲ့ စစ်ဘက်ရေးရာ လုံခြုံရေး တပ်ဆွယ်ရုံးတခုကို ဒီကေဘီအေဘက်က လက်ပစ်ဗုံးနဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
Posted by KCA.UK at 17:410comments
အကျဉ်းစံ ကရင် နှင့် ရခိုင် တော်လှန်ရေးသမား (၃၄) ဦး လွှတ်ရန် ဒေလီတွင် ဆန္ဒပြ (ရုပ်သံ)
Posted by KCA.UK at 16:350comments
Posted by KCA.UK at 12:020comments
ဖဒိုမန်းရှာကို အခုလို ဆုပေးဖို့ကိစ္စ ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ ဖို့ဝိန်းမြို့ အမျိုးသား သွေးစည်းညီညွတ်ရေး ကော်မတီ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရေးမှူး ဦးမောင်မောင်စိုးက ပြောပြရာမှာ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှုအပြီး ဖို့ဝိန်းမြို့မှာ IPFW အင်ဒီယားနား တက္ကသိုလ် ပါဒူးတက္ကသိုလ်က ကမကထပြုပြီး နိုင်ငံတကာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ ညီလာခံတရပ် ကျင်းပခဲ့ကြောင်း၊ အဲဒီ ညီလာခံမှာ ဖဒိုမန်းရှာလည်း ပါဝင်တက်ရောက်ပြီး အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ ညီမျှရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကို ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ အခုအချိန်မှာ ဖို့ဝိန်း ညီလာခံကို ဒုတိယအကြိမ် ကျင်းပဖို့ စဉ်းစားကြရင်း ဖဒိုမန်းရှာကို ဂုဏ်ပြု ဆုချီးမြှင့်ရေးကိစ္စ ပါဝင်လာခဲ့ကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ ဦးမောင်မောင်စိုးက ဆက်လက်ပြောပြရာမှာ -
“ဒီ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကို အခြေခံတဲ့ ဒီ award ကို စဉ်းစားတယ်။ စဉ်းစားတော့ အကြောင်းအချက် နှစ်ချက် ဖန်လာတယ်။ ၁ အချက်က ဖဒိုမန်းရှာက ကျွန်တော်တို့ ညီလာခံကြီးကို အစပြု ကမကထ ဦးဆောင်ခဲ့သလို သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ အားလုံးဟာလည်း အမျိုးသားရေးနဲ့ တန်းတူညီမျှရေး ဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ်မှာ တစိုက်မတ်မတ် ရှိတယ်။ ယုံယုံကြည်ကြည် ရှိတယ်။ သမာသမတ် ရှိတယ်။ သူရဲကောင်းတယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရှိရတယ်။ ဖဒို မန်းရှာရဲ့ အနစ်နာခံမှုတွေက တခုတည်းအတွက် မဟုတ်ဖူး။ တစုံလုံးအတွက် ဖြစ်နေတယ်။ အမျိုးသား တန်းတူရေး equality ကို သူက ဦးစားပေးတယ်။ နောက်တခုက တခုလုံးရဲ့ လွတ်မြောက်ရေးကို တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် အမျိုးသား တန်းတူရေးနဲ့ သာတူညီမျှရေးဆုကို ကျွန်တော်တို့ ပေးဖို့ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။”
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဖဒိုမန်းရှာဟာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၄) ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့မှာ မသမာသူတွေရဲ့လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်မှု ခံခဲ့ရပါတယ်။
အခု ပထမဆုံးအကြိမ်ပေးအပ်မဲ့ ဒီ အမျိုးသား တန်းတူရေးနဲ့ သာတူညီမျှရေး ဆု ကို ဖို့ဝိန်းမြို့ IPFW အင်ဒီယားနား တက္ကသိုလ် ပါဒူးတက္ကသိုလ် မှာ မတ်လ ၅ ရက် နဲ့ ၆ ရက်နေ့တွေမှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဖို့ဝိန်း ညီလာခံ ကျင်းပဖြစ်လို့ ညီလာခံက သဘောတူရင် ဒီဆုကို နှစ်စဉ်ချီးမြှင့် သွားဖို့ မျှော်လင့်ရကြောင်း ဦးမောင်မောင်စိုးက ပြောပါတယ်။
Posted by KCA.UK at 09:050comments
အခုလို ရှေ့တိုးဖို့ ငြင်းဆန်နေတဲ့ တပ်တွေကတော့ ဗိုလ်မှူး စောမောင်ဝင်း ခေါင်းဆောင်တဲ့ BGF နယ်ခြားစောင့်တပ်အမှတ် ၁၀၁၉ နဲ့ ဗိုလ်မှူး စောလှိုင်စိမ့် ခေါင်းဆောင်တဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်အမှတ် ၁၀၁၇ တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတပ်တွေဟာ မြေမြှုပ်မိုင်း အန္တရာယ်ကို အကြောင်းပြပြီး ရှေ့တိုးဖို့ ငြင်းဆန်နေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ကေအန်ယူ ဖားအံခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဖဒိုစောအောင်မော်ဧက ပြောပါတယ်။
“တပ်မဟာ ၇ ဌာနချုပ်နေရာကို ရှင်းမယ်လေ၊ လာမယ်ဆိုတော့ အဲဒါ BGF တွေကို အရင် လာခိုင်းတာပေါ့နော်။ အဲဒါ သူတို့ BGF ကလည်း ငါတို့ မသွားရဲဘူး မင်းတို့ အရင်သွားဆိုပြီးတော့ သူမသွားချင်ဘူး၊ ငါမသွားချင်ဘူးနဲ့ နည်းနည်းလောက်ပဲ လာပြီးတော့ သူတို့ ရပ်နေတယ်။ ငါတို့ မသွားဘူး၊ မိုင်းရှိတယ်၊ သွားရင်တော့ မိုင်းထိမယ်ပေါ့။”
အဲဒိ နယ်ခြားစောင့်တပ်တွေကို စစ်ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် စကခ-၁၉ တပ်က အမိန့်ပေး ညွှန်ကြားနေတာလို့ သိရပါတယ်။
စစ်အစိုးရရဲ့ BGF နယ်ခြားစောင့်တပ် ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ကရင်တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်ရမှာကို မလိုလားတဲ့အတွက် BGF နယ်ခြားစောင့်တပ်ကနေ ထွက်ပြေးပြီး ကေအန်ယူနဲ့ ပြန်လည် ပူးပေါင်းလာမှုတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလကစလို့ သိသိသာသာ တိုးများလာတယ်လို့ ကေအန်ယူ တပ်မဟာ (၇) အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။
BGF တွေအတွက် နောက်တခေါက်ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Posted by KCA.UK at 11:060comments
ရန်ကုန်တွင် “ရှမ်းပြည်နယ်နေ့” အမည်တပ်ကျင်းပခွင့် မပေး
ခိုင်သွယ် Tuesday, 08 February 2011 16:12
ယမန်နေ့က ၆၄ နှစ် ပြည့်ခဲ့သည့် ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ အခမ်းအနားကို ရန်ကုန် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ပြည်လမ်း၊ အောင်မြေဘုံသာ ၉ မိုင် သျှမ်းကျောင်းတွင် ကျင်းပခွင့် ပေးခဲ့သော်လည်း ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ အခမ်းအနားဟု အသုံးပြုခွင့်မပေးဘဲ ရှမ်းပြည်နယ် တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံ ပဒေသာ ကပွဲအခမ်းအနားနှင့် အစားအစာ ဈေးရောင်းပွဲနေ့ ဟူ၍သာ အမည်တပ်ခွင့် ပြုခဲ့ကြောင်း ပွဲကျင်းပရေး ကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်တွင် ၆၄ ကြိမ်မြောက် ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ ကျင်းပနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
“ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ဆိုပြီး ကျင်းပလို့ မရတာ ကြာပြီပဲ။ ဒီနှစ်လည်း ပွဲလုပ်ခွင့် ၁ ရက်ပဲ ပေးတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ် တိုင်းရင်းသားများ ရိုးရာပဒေသာကပွဲနဲ့ ဈေးရောင်းပွဲ ဆိုပြီး လုပ်ပေါ့ ဆိုပြီး ချပေးလာတာပဲ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ကို ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများက အလေးအမြတ်ထား ကြသော်လည်း ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ဟု သုံးခွင့် မရသည့်အတွက် စိတ်မကောင်းကြောင်း၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများသည် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြား၌ နေထိုင်သော တိုင်းရင်းသားကြီးမျိုး ဖြစ်သည့်အတွက် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားနေ့ သို့မဟုတ် ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ဟု သတ်မှတ်ကာ ကျင်းပခွင့် ပေးသင့်ကြောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့ဝင်တဦးက ပြောသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ နေရာဒေသ အသီးသီး၌ နေထိုင်ကြသော ရှမ်း၊ ပအိုဝ်း၊ ပလောင်၊ ဓနု စသည့် တိုင်းရင်းသားတို့ လာရောက်တွေ့ဆုံကြပြီး ပဒေသာကပွဲတွင် ၀င်ရောက်ကပြခြင်း၊ ဒေသထွက်ကုန်နှင့် အစားအသောက်များ ရောင်းချခြင်းတို့ ပြုလုပ်ကြသည်။
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ၏ ရှမ်းရိုးရာ အစားအစာများ၊ ရိုးရာအ၀တ်အထည်များနှင့် ရှမ်းစာပေနှင့် ရေးသားထားသည့် စာအုပ်များကိုလည်း ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့မှ ရောင်းချပေးလျက်ရှိသည်။
“ရှမ်းဘာသာစကားနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု မပျောက်အောင် ပဒေသာ ကပွဲ လုပ်ခွင့်ပြုတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရမယ်” ဟု ပွဲကျင်းပရေး ကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ဆိုသည်။
အဆိုပါ ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ပွဲသို့ လားရှိုးအသင်း၊ သီပေါအသင်း၊ ကျောက်မဲအသင်း၊ တောင်ကြီးအသင်း စသည်ဖြင့် ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့ များကလည်း အရောင်းဆိုင်များ ဖွင့်လှစ်ရောင်းချသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများနှင့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသား အနွယ်ဝင် စုစုပေါင်း ၂ သိန်းဝန်းကျင် နေထိုင်ကြကြောင်း ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့မှ သိရသည်။
Posted by KCA.UK at 20:540comments
Submitted by Karen Information Center on Tuesday, 8 February 2011
ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ရက်။ ကေအိုင်စီ
ကေအဲန်ယူ ပြည်ထဲရေးနှင့် သာသနာရေးတာဝန်ယူခဲ့သူ ပဒိုမန်းဇဋိလ ၆၉နှစ်သည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ရက်နေ့တွင် လူကြီးရောဂါ ဖြင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီး ၎င်း၏ ဈာပနအခမ်းအနားကို ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တွင် ယမန်နေ့က ပြုလုပ်ပြီးစီးသွားခဲ့သည်။
လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ အပါအ၀င် လူထုပရိဿတ် ၄၀၀ခန့် လာရောက်ခဲ့သည့် ပဒိုမန်းဇဋိလ၏ ဈာပန အခမ်း အနားကို မိသားစု၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းများက ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ ထုံးစံအတိုင်း သံဃာတော်များ ပင့်ဖိတ်ကာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး အခြားတိုင်းရင်းသားများကလည်း သူ၏နောက်ဆုံး ခရီးကို ဂါရ၀ပြုခဲ့ကြသည်။
မန်းဇဋိလ၏ ဇနီးဖြစ်သူ နန်းသိန်းမြိုင်က “ဒီရောဂါကို သူခံစားနေတာ အတော်လေးကြာပါပြီ။ ကုလိုက်၊ သက်သာလိုက် ဘုရား၊ တရားအလုပ်လေးလုပ်လိုက်နဲ့ အခုတော့ သူ အေးချမ်းသွားပြီ။ နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ သားအကြီးနှစ်ယောက်ကလည်း သူတို့ အဖေကို မမှီလိုက်တာကို စိတ်မကောင်းကြဘူးလေ။”ဟု ဆိုသည်။
မွေးချင်းမောင်နှမ ၈ဦးအနက် အထွေးဆုံးသားဖြစ်သူ ငယ်နာမည် စစိုးသိန်း ခေါ် ပဒိုမန်းဇဋိလကို ၁၉၄၁ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ (မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၀၃ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၃ရက်နေ့)တွင် သထုံခရိုင်၊ အပေါင်မြို့နယ် ကျောက်စ ရစ်ကျေးရွာ၌ မန်းလောင်ကြိုင်၊ နန်းစောမျှင်တို့မှ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။
သူသည် ဇာတိရွာတွင် ၄တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီး မော်လမြိုင်မြို့ အထက်တန်းကျောင်းမှတဆင့် မော်လမြိုင်ကောလိပ်၊ ၎င်းနောက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ဘီအေ(၀ိဇ္ဖာ)ဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၇၃ခုနှစ်တွင် ဗမာ့တပ်မတော် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကို ၆လကြာ သာ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အဆိုပါသင်တန်းမှ ကရင့်တော်လှန်ရေး လွတ်မြောက်နယ်မြေသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
၁၉၇၆ခုနှစ်တွင် ကေအဲန်အယ်လ်အေတပ်ရင်း(၁၀၁)ဌာနချုပ် ၀မ်းခါဂိတ်တွင် ရဟန်းအမည် အရှင်ဇဋိလ ဘွဲ့အမည်ဖြင့် သီ တင်းသုံးရင်း အမျိုးသားရေး၊ တော်လှန်ရေးတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၇ခုနှစ်မှ ၁၉၈၅ခုနှစ်အထိ ကေအဲန်ယူ အရံဗဟိုကော်မတီဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၅ခုနှစ်တွင် ဘိတ်ထားဝယ်ခရိုင်၌ မွေးမြူရေးနှင့် ငါးဖမ်းဌာနတာဝန်ကိုလည်း ကောင်း၊ ၁၉၉၅ခုနှစ်တွင် ၁၁ကြိမ်မြောက် ကေအဲန်ယူ ကွန်ဂရက်မှ ပေးအပ်သည့် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ငါးဖမ်းဌာနတာဝန်ခံအ ဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
၂၀၀၀ခုနှစ် (၁၂)ကြိမ်မြောက် ကေအဲန်ယူကွန်ဂရက်တွင် ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီအဖြစ် ထပ်မံ ရွေးကောက်ခံရပြီး ဗဟိုပြည် ထဲရေးနှင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တွင် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရကာ ၂၀၀၇ခုနှစ်၊ ထိုမှဆက်၍ ၂၀၀၉ခုနှစ်အထိ လုပ်ငန်းတာ ၀န်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်အပြင် ထိုနှစ်တွင် ကျန်းမာရေးအရ အနားယူခဲ့သော်လည်း KEAB (Karen Elder Advisor Board) တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ကွယ်လွန်သည်အထိ ပါဝင်ခဲ့သည်။
ရိုးသားကြိုးစားပြီး ယုံကြည်မှုပြင်းထန်သည့် မျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ မန်းဇဋိလသည် အချောင်သမား၊ ဂိုဏ်းဂန၀ါဒကို ပြတ်သားစွာ ဆန့်ကျင်ကာ စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှုနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် လူငယ်များအပေါ် ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံ ပေါင်းသင်းတတ်ပြီး အမျိုးသားရေး၊ သာသနာရေးတာဝန်များကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အတွက် သူ ကွယ်လွန်သွားခြင်း သည် အမျိုးသားအတွက် ကြီးမားသော ဆုံးရှုံးမှုပင်ဖြစ်သည်ဟု ပဒိုစောလေးတောက ဈာပနအခမ်းအနားတွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။
ပဒိုမန်းဇဋိလ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ဇနီး နန်းသိန်းမြိုင်နှင့်အတူ သားလေးဦး၊ သမီးတစ်ဦး ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
Posted by KCA.UK at 20:500comments
၆၄နှစ်မြောက် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးနေ့အတွက် ဂုဏ်ပြုတေးတစ်ပုဒ်
Posted by KCA.UK at 12:470comments
We would like to invite you toaglobal day of action on 11th February 2011 to call for an immediate release of 34 Karen and Arakanese freedom fighters who have been in Indian Jail for almost 13 years. In the UK, there will beademonstration in front of the Indian High Commission at 12:00 noon to 1:00PM in London.
These 34 members are from the National United Party of Arakan (NUPA) and the Karen National Union (KNU)... and when they were onamission together, they were arrested by Indian intelligence in 1998. Six of their leaders were executed by Indian authority and the rest were put in Indian jail since then. They have recently been allowed interviews with UNHCR where the interview took place last month, January 2011. We are still waiting for the result of the UNHCR’s interview. If they were not successful and deported back to Burma, they could face persecution by the Burmese regime. 11 February 2011 is 13th anniversary of their arrested.
On global day of Action, we will urge UNHCR to grant them refugee status, Indian Government to release them immediately and commit not to deport them back to Burma.
Please come and join the demonstration to raise our voices for their freedom.
Time: 12:00 to 13:00 hour
Place : High Commission of India
This action is organized by Karen National Union- UK, Arakan Students' and Youths' Congress (AASYC) and supported by the Burma Campaign UK.
Posted by KCA.UK at 20:410comments
Posted by KCA.UK at 10:440comments
Karen Community Based Organizations's summery Report re recent attack
Posted by KCA.UK at 10:210comments
ကမ္ဘာသိ ဓါတ်ပုံများ ရိုက်ကူးခဲ့သူ ကရင်တယောက်ရဲ့ အကြောင်း
ကရင်ပြည်နယ်ဇာတိ စောလောအယ်စိုးဟာ ရန်ကုန်မှာ ဥပဒေနဲ့ ဘွဲ့ရအပြီး သူဝါသနာပါတဲ့ ဓါတ်ပုံသတင်းထောက် လောကထဲကို ခြေစုံပစ် ၀င်ရောက်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေအနက် မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ခုနှစ် စက်တင်ဘာအရေးအခင်း ဓါတ်ပုံတွေကတော့ ကမ္ဘာကျော် ဓါတ်ပုံတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူစွန့်စား ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ အကြောင်း တစေ့တစောင်းကိုတော့ အောက်မှာ ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာတယောက် ဖြစ်လာရတာကလည်း သူ့ရဲ့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ၀ါသနာအရင်းခံ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှိနေခဲ့တာနဲ့ တစိုက်မတ်မတ် ကြိုးစားမှုလာခဲ့တာတွေကြောင့် ဆိုတာ နယ်စပ်မှာ ထွက်လာအပြီး သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ အချိန်က သိလာရတာပါ။ သူပြောနေကျ စကားတခွန်းတော့ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သူ့ရဲ့ ကင်မရာရှေ့မှာ မတရားမှုတွေ ဥပဒေမဲ့ အလုပ်ခံရတာ တွေကြောင့် ရလာတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေဟာ တနေ့တချိန်မှာ လူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေအတွက် ပြနိုင်တဲ့ဟာတခုခု ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ထိုလူတွေအတွက် သူတိုက်ပွဲဝင်တာ တခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ ခံယူထားတဲ့ အချက်ပါပဲ။
Posted by KCA.UK at 10:050comments